Inkundla yezemidlalo eGibhithe | Ukuhamba kwe-Absolut
Lapho sicabanga ngeGibhithe izingqondo zethu zigcwala ngokushesha ngemifanekiso ejwayelekile kakhulu yezwe, ngesithunzi esihle se- amaphiramidi ingemuva. Kodwa-ke, isiko kuleli zwe lasendulo nelithakazelisayo linezinye izinkulumo eziningi. Enye yazo yi- yaseshashalazini eGibhithe.
Itiyetha lasendulo lafika eGibhithe livela kumaGreki ngesikhathi se- isikhathi se-hellenistic (phakathi kwekhulu lesi-XNUMX nelesi-XNUMX BC). Ezweni leNayile lokhu kubonakaliswa kobuciko kwakuxhunyaniswe nemikhosi ethile yezenkolo nemikhosi efana ne inkolo ka-osiris, ngemidlalo nemibukiso edonse izinsuku ezimbalwa.
Kodwa-ke, isiko lemidlalo yaseshashalazini emazweni aseGibhithe lanyamalala phakathi neNkathi Ephakathi futhi alizange lizalwe kabusha maphakathi nekhulu le-XNUMX. Okokuqala sibonga ithonya laseFrance futhi kamuva lelo laseBrithani.
1 Ukuzalwa kwetiyetha yesimanje eGibhithe
2 Amatiyetha amakhulu eGibhithe
3 ICairo Experimental Theatre Festival
Ukuzalwa kwetiyetha yesimanje eGibhithe
Imidlalo yeshashalazi edabuka eYurophu ithonywe ukuzalwa nokuvela kwenkundla yaseshashalazini yama-Arabhu yanamuhla eyaqala ukuthuthuka eGibhithe ngaleso sikhathi. Ngaleyo minyaka kwavela ababhali bokuqala abadumile baseGibhithe U-Ahmed Shawqi, eguqula amahlaya amadala athandwayo avela ezweni. Lezi zinguquko bezingenakho ukuzenzisa okukhulu kunalokho kokujabulisa umphakathi wama-Arabhu, ngaphandle kweziphathimandla zaseBrithani zamakholoni ezingabanaki nakancane.
UTawfik al-Hakim, "ubaba" wetiyetha yesimanje yaseGibhithe
Kodwa-ke, kubhekwa njengokuyiyo UTawfiq al-Hakim (1898-1987) ungubaba wetiyetha yanamuhla yaseGibhithe, eminyakeni eyishumi yama-20s yekhulu elidlule. Ngaleyo minyaka, lo mbhali wakhiqiza cishe imidlalo engamashumi amahlanu yezinhlobo ezahlukahlukene kakhulu. Namuhla umsebenzi wakhe uthathwa njengophelelwe yisikhathi ngandlela thile, kepha usaziwa njengomuntu obalulekile enkundleni yezemidlalo eGibhithe.
Esinye isibalo esikhulu setiyetha ezweni laseNayile Yusuf idris (1927-1991), umbhali nomlobi wemidlalo ngokuphila okukhulu okugcwele ukuvakasha nezingxabano zomuntu siqu ezisuselwa kubushoshovu bezepolitiki. Wangena ejele izikhathi ezingaphezu kwesisodwa futhi eminye imisebenzi yakhe yavinjelwa umbuso wobushiqela uNasser. Waphoqeleka nokuthi ashiye izwe isikhathi esifushane, ebalekela ingcindezelo.
Kwezobuciko, ukwazile ukwenza inkundla yeshashalazi ibe yesimanje ngesi-Arabhu kuzindikimba zemisebenzi yakhe nasolimini olusetshenziswe kuyo. Isibalo sakhe sivame ukuqhathaniswa nesombhali odumile waseCairo UNaghib Mahfuz. Njengaye, u-Idris waphinde waqokelwa indondo yeNobel Prize, yize kuyena engazange athole umklomelo obulindelwe kangako, wasala emasangweni.
Phakathi kwabalobi besimanjemanje kuyadingeka ukugqamisa owesifazane: Ukuzwela kweSafaa, umbhali womsebenzi odumile I-Ordalie / Terreur. Ngaphezu kokunikela kwakhe ezweni lezeshashalazi, uFathy ugqame njengomlobi nomenzi wamafilimu, ngasikhathi sinye lapho eshicilele khona imibhalo eminingana yefilosofi. Njengabanye ongqondongqondo abaningi baseGibhithe, waphoqeleka ukuba ashiye izwe. Njengamanje uhlala eFrance lapho asola khona obala ezikhathini eziningi isimo sabesifazane emhlabeni wamaSulumane.
Amatiyetha amakhulu eGibhithe
Kwaphela amashumi eminyaka indawo okwakuyinkomba enkulu yethiyetha eGibhithe kwakuyi IKhedivial Operae ECairo, indawo yaseshashalazini endala kunazo zonke e-Afrika, eyakhiwa ngo-1869. Eminyakeni eminingi kamuva, ngo-1921, le nkundla yemidlalo yeshashalazi eyakhiwa izifanekiselo nayo yakhiwa I-Alexandria Opera House (manje ibizwa ISiyyid Darwish Theatre), ubukhulu obuncane kakhulu.
Indlu enhle yeCairo Opera House
Ngeshwa, isakhiwo esihle seKhedivial Opera sabhujiswa ngokuphelele ngomlilo ngo-1971.
Inhlokodolobha yaseGibhithe yayingenaso isigaba semidlalo yaseshashalazini kuze kube ngo-1988, lapho i- ICairo Opera. Lesi sakhiwo esibabazekayo siseGezira Island, eNayile, ngaphakathi kwendawo yaseZamalek. Iphinde ibe yingxenye yesakhiwo esikhudlwana, iNational Cultural Center yaseCairo futhi inezinkundla zemidlalo yaseshashalazini eziyisithupha, enye yazo evulekile futhi enesibalo sababukeli abangu-1.200.
ICairo Experimental Theatre Festival
ICairo Opera House ibamba minyaka yonke i- Umkhosi Wokulingisa Wetheyetha, omunye wemicimbi yamasiko ebaluleke kakhulu ezweni nasesifundeni sonke seMpumalanga Ephakathi.
Iphosta yohlobo lwango-2018 lomkhosi weCairo Experimental Theatre
Lo mkhosi ugujwa ngenyanga kaSepthemba futhi uhlala izinsuku eziyi-10. Kuwo, ababhali abadlalayo bakazwelonke nabangaphandle nezinkampani zemidlalo yaseshashalazini banikezwa ukuqokwa. Zonke zakha iphosta ehlukahlukene nenemibala enemidlalo eminingi yansuku zonke emagcekeni ahlukene etheatre.
Abalingisi, abaculi bezimonyo, abaculi, abaphathi bemvunulo, abaqondisi nababhali bemidlalo yokudlala abaklonyeliswe kwiCairo Experimental Theatre Festival baklonyeliswa ngomfanekiso oqanjiwe okhiqiza isithombe Thot ukuthi ngesikhathi seGibhithe lasendulo kwakucatshangelwa, phakathi kwezinye izinto, njengonkulunkulu wezobuciko. Isithombe esihola lo msebenzi sihambisana nomcimbi wokuvala walo mkhosi kuhlobo lwawo lwango-2018.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Inkundla yemidlalo eGibhithe
Yiba seGibhithe kusuka ngoSepthemba 15 kuya ku-28 ngifuna ukwazi ngemidlalo ezayo, izinkampani zemidlalo yaseshashalazini, izingxoxo zokucobelelana ngolwazi, onodoli, amaski ... ngiyabonga
Abantu abacebe kakhulu abayi-10 eNew York